शब्दकोश: मिसावटमा झर्रो मन
“भेलबाढी जस्तो सुसाउने मन पनि मरूभूमिको बलौटे समुद्र जस्तो शान्त हुँदोरहेछ है !”
उसलाई भन्नुपर्नेछ यस्तै-यस्तै कुरा । ऊ सुदूर देशमा धपेडी सहिरहेकी मेरी पत्रमित्र साथी । कुराकानी नभएको धेरै भयो, र सायद अब हुने पनि छैन कि ? मैले नै दुईबीचको सम्पर्कमा भाँजो हालिदिएँ । ऊसँगको पर्खाल यति अग्लो लाग्दैछ, मानौँ कसैले हामीबीच अर्को रुखो पृथ्वी राखिदिएको होस् । उसको मौनता कति झर्कोलाग्दो !! घण्टाघरको घण्ट जस्तै कान टट्टाएको छ । गहनाबिनाको बुच्चे कान मैँ हुँ कि ! कसैको साभार गरिएको महान् बोली जस्तो मेरो पदचाप । उसलाई अन्दाज सम्म नहोला, म उसको सम्पर्क बाहिर ठेगानाविहीन चिठी जस्तै कतिसम्म यता-उता भौँतारिएको छु । नियति नामको हल्कारोको पिठिउँमा बोकिएको छु नि म !
अस्ति नै भनेको हुँ नि, सहर पसेपछि म अलि बिग्रिएँ, मनैदेखि । झन् ऊ त महासहरको भेलमा पुगेकी छे, कस्तो दशा भोग्दै होली ? उसलाई आफू बिग्रिएको कुरा सुनाउन पनि कुनै ग्लानि लाग्दैन, के भएको हो यस्तो ? उसमा म आफैँलाई देख्‍छु । ऐया भन्दा उसले, यता आफ्नो छातीमा सियो वारपार भइसक्छ । र पनि मिठासको आलो रगत कुद्छ शरीरभरिको सुरुङमा ।
अँ त, म फेरि-फेरि बिग्रिने ठाउँ नहुने गरी बिग्रिएँ । पहिले हाँस्थेँ, रुन्थेँ पनि । अचेल गैँडाको छाला मेरो तन-मनमा प्रत्यारोपण भए जस्तो भएको छ । न हाँस्न जान्दछु, न रुन नै । कामकाजी ठाँटमा अफिसको रहनसहनमा घुल्छु - पीडा, कुण्ठा र निराशाले पाकेका आफूभन्दा गएगुज्रेका हालत भएकाहरूको अनुहार पढ्छु र झन् हाँसो र रोदनको दुनियाँ भुल्न पुग्छु । कतै तिमीले गाउँले ठिटोको जुग पुरानो पुस्तौनी साइकल देखेकै हौला, ठिटो कति कायल हुन्छ साइकलको पन्चर टाल्दा-टाल्दा । गाउँका उबडखाबड ठाउँमा घिस्रिँदा गति छाड्न पुग्ने साइकलको ट्युब अनगन्ती पटक टालिँदा फेरि पन्चर टालिने ठाउँ नहुने गरी रद्दीमा परिणत हुँदो हो एकदिन । उसो त तिमी भन्लfउ दार्शनिक कसीमा, हाम्रो जीवन पनि पाङ्ग्रा नभए पनि साइकलको त्यो ट्युबभन्दा कति नै फरक छ र ? मर्मत गरिँदै, टालिँदै जानुपर्ने र फेरि दरिलो भए झैँ कुद्‌नुपर्ने रीत … …
मुलुकमा पनि सङ्क्रमणकालको ज्वरो छ भन्छन्, म पनि सङ्क्रमणकै रापमा छु कि जस्तो छ । सहरिया हावापानीमा पाकेको म गतिलो रक्सी भइनँ । खाँटी ‘लोकल’ खान त गाउँको उकालोतिर सोझिनुपर्छ भन्छन् स्वाद लिनेहरू । म यस्तो रक्सी भएँ, यस्तो रक्सीको सरसङ्गत-सम्पर्कमा आउनेहरूलाई कस्तो मात दिएँ हुँला मैले यस बीचमा !? सप्पैसप्पै दोष मेरो हो कि, मलाई यस्तो बेस्वादे रक्सी पार्ने सहरिया हावापानीको ? अचेल सोध्न पनि छाडिसकेँ ।
मबाट कठोर मात पाउनेहरूको आँखामा म एउटा परेली-रेसा भएर कता बगिसकेँ हुँला । उसबाट पनि बगेर टाढा बढारिन मन लाग्यो, ताकि धेरै मात मबाट ऊसम्मन प्रसार नहोस् । मेरा सम्पर्कका डोरीहरूबाट उसलाई ‘अनपलग्ड’ गर्ने बेलामा करेन्ट कतिसम्म लाग्यो भने, पत्थरको जुनी लिएन संवेदना गुमाएको मेरो ओखर मनमा पनि कम्पन छुट्यो । तर उसलाई बिदा गर्नै थियो । ऊ एउटा आफ्नै उद्देश्यको रथमा सोझिएकी युवती, म आफ्नो मायाजालको रटान लगाउने युवक । तालमेल कहाँ मिल्थ्यो पनि ? उसले जस्तो आफ्नो भूमिदेखि दूर, कुनै रूखमुनि गएर म तपस्या गर्न सक्दो हुँ त उसलाई जत्तिकै प्रेम म आफैँलाई गरेर बस्दो हुँ । आफ्नै आँखामा म त अचेल विरानो भएको छु, जसलाई दयावश बाससम्म दिएको हुँ । स्याहार, सुमसुमाहट त त्यसले मबाट कल्नासम्म नगरोस् ।
म बिग्रिनुको प्रमाणपत्र म स्वयम् हुँ । त्यस्तो प्रमाणपत्र, जो हत्तपत्त कुनै आँखाले बुझ्दैन । धारिलो चश्मा पनि फेल खान्छ । अचेल कसैले कसलाई पो मनदेखि दूरबीन सोझ्याएर हेर्छ र ? म पनि त्यस्तै बहिर्मुखी जीवमा रूपान्तरण भए क्यार ! जो चिच्याउँछ र गर्जन्छ मात्रै – गुनगुनाउँदैन ।
जीवनको मिलमा पिसिन पुगेको थिएँ, के-के मिसावटमा परेँ । सायद साखुल्ले हुने बहानामा आफूलाई ठान्छु - झर्रो मन थियो साथमा, नानाथरी रङरोगन मिसावट भयो ।
उसको पनि हालत मेरो जस्तै त होला ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, October 07, 2010
s October 09, 2010
Its strange...Life is such ...not only yours...but every one suffers same... :)